Gobolada Dalka oo ka socoda banaan baxyo ka dhan ah Shabaab | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Gobolada Dalka oo ka socoda banaan baxyo ka dhan ah Shabaab
Gobolada Dalka oo ka socoda banaan baxyo ka dhan ah Shabaab
Wariyaheena nooga soo warama Baydhabo Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa soo sheegaya in dibadbaxan ay ka qeybqaateen Kumanan dadweyne ah kuwaasoo socod kusoo maray wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi, waxeyna ku qeylinayeen ereyo ka dhan ah maleeshiyaadka Shabaab .
Dibad Baxayaasha ayaa sheegay in xiligan la joogo wakhtigii loo midoobi lahaa la dagaalanka Al shabaab,waxaana Dhaliyarada Boroordiiqaysay ay wacad ay ku mareen in ay u dhimandoonaan Difaaca dalkooda.
Dhanka kale Dibadbaxyadii ugu ballaarnaa oo looga soo horjeedo falalka guracan ee maleeshiyaadka Shabaab iyo xasuuqii ka dhacay isgoyska Soobe ayaa maanta lagu qabtay magaalooyinka Dhuusamareen iyo Guriceel.
Wariyaha nooga soo warama deegaannadaasi Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa soo sheegaya in dibadbaxani ay ka qeybqaateen kumannaan dadweyne ah oo aad uga careysnaa xasuuqii lagu laayay boqolaal shacb Soomaaliyeed ah oo aan waxba galabsan.
Banaanbaxayaasha oo badankood madaxa ku soo xirtay weer gaduudan ayaa ku qeylinayay ereyo ka dhan ah maleeshiyaadka Shabaab, waxeyna socod ku soo mareen wadooyinka magaalooyinkaasi.
Mas’uuliyiin la hadashay dibadbaxayaashaasi ayaa dalbaday in meel looga soo wada jeesto maleeshiyaadka Shabaab, iyagoo sheegay in la gaaray xilligii midnimada ummadda iyo baaba’ maleeshiyaadka Shabaab.
Previous articlemuqdisho soo gaartayDeeq dawo ah oo Puntland ugu talagashay dhaawacyada
Next articleRa’iisul wasaare Kheyre iyo ku Xiggeenkiisa oo soo booqday Xarunta Gurmad qaran ee Magaaladda Muqdisho “Sawirro”